ရှေ့နေ ဦးကိုနီ အသတ်ခံရမှုတွင် အမှု ကွင်းဆက်များကို ဖော်ထုတ်မှု အားနည်းခဲ့ဟု ဦးရောဘတ်စန်းအေ?? - Yangon Media Group
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ပါတီ၏ ဗဟိုဥပဒေ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်သူ ရှေ့နေဦးကိုနီ အသတ်ခံရသည့်အမှုသည် အမှုကွင်းဆက်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အားနည်းခဲ့ကြောင်း ရှေ့နေဦးကိုနီနှင့် ကိုနေဝင်းတို့ နှစ်ပတ်လည် (တစ်နှစ်ပြည့်) အောက် မေ့ဖွယ်ဂုဏ်ပြုပွဲ၌ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးရောဘတ်စန်းအောင် ပြောဆိုသည်။
”နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတာ ဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုရင် သေနတ်တွေသိမ်းလို့ရထားတယ်။ အဲဒီသေနတ်တွေမှာ နံပါတ်တွေပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကို မေးရင်လဲရနိုင်တယ်။ အင်တာပိုကနေတဆင့် ဆက်သွယ်ရင်လည်းရတယ်။ အဲဒီသေနတ်က ဘယ်ကိုရောင်းလဲ။ မောင်ဖြူကိုရောင်းတယ်။ မောင်ဖြူက ဘယ်ကိုပေးလဲ။ ကွင်းဆက်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်ရင် လက်မည်းကြီးကို ဖော်လို့ရပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့က မေးတဲ့အခါမှာ သူတို့က လက်နက်ကို ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်သူ့ကိုရောင်းဖို့ဆိုတာကို သူ့မှာမေးဖို့မရှိပါဘူးလို့ CID က ဒုတိယ ရဲမှူးကြီးဇော်သန်းက ပြောတယ်။ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း သူမသိဘူးတဲ့ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သေနတ်ကိုရှိရမယ်။ နံပါတ်ရှိတယ်။ လိုက်လို့ ရတယ်။ ဘယ်ကုမ္ပဏီကလဲဆိုတာ ရှိနေတယ်” ဟု ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ပြောသည်။
တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေဦးကိုနီသည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်တွင် ပြည်ပခရီး စဉ်တစ်ခုမှအပြန် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာလေဆိပ်တွင် သေနတ်သမားကြည်လင်း၏ အနီးကပ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ ရခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့နေဦးကိုနီအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီးနောက် သေနတ်သမားမှ ထွက် ပြေးစဉ် လေဆိပ်အနီးရှိ တက္ကစီယာဉ်မောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုနေဝင်းက လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ ၎င်းပါသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းခံခဲ့ရကာ သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သေနတ်သမားကြည်လင်း အပါအဝင် အောင်ဝင်းဇော်၊ ဇေယျာဖြိုးနှင့် အောင်ဝင်းထွန်းတို့ကို ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၃ဝ၂/၃၄/ ၂၁၂ အပြင် သေနတ်သမားကြည်လင်းနှင့် အောင်ဝင်းဇော်တို့ကို လက်နက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉(စ)၊ ၁၉(ဃ) ဖြင့်လည်းကောင်း တရားစွဲဆိုထားကာ စစ် ဆေးလျက်ရှိသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထဲရေးကို မေးချင်တာက အောင်ဝင်းခိုင်အမှုမှာ ဘာဖြစ်လို့ ခရီးဆုံးအောင် မလျှောက်လှမ်းခဲ့လဲ။ အဲဒါစစ်ခဲ့တဲ့ တချို့သက်သေတွေကို ဘာဖြစ်လို့အမှုမှာ မထည့်ထားလဲ။ ထည့်သင့်ထည့်ထိုက်တဲ့ တရားခံတွေ ဘာဖြစ်လို့ မထည့်ထားလဲ။ အဲဒီမှာ နဂါးလေးခေါ်အောင်နိုင်မြင့်ကို ဘာလို့ အစိုးရသက်သေအနေနဲ့ ထည့်ထားတာလဲ။ သူ့ကိုထည့်လိုက်ရင် နောက်ထပ်ပါလာဦးမယ်။ နဂါးလေးခေါ် အောင်နိုင်မြင့်ကိုခေါ်ပေးပါလို့ ဥပဒေအရာရှိကိုပြောတယ်။ တင်ပါဆိုတော့ ဥပဒေအရာရှိက ဘာမှမလုပ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ”ဟု ဦးရောဘတ် စန်းအောင်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါအမှုမှ တရားလိုနှင့် တရားလိုပြသက်သေ ၈ဝ ဦးရှိသည့် အနက် ၇၁ ဦးကို စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါအမှုတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကာ လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်သည့် အောင်ဝင်းခိုင်အား တရားခံပြေးအဖြစ် ကြေညာထားသည်။
ရုရှားသမ္မတ ပူတင်က မြောက်ကိုရီးယားအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ခြောက်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲ ပြန်လည် အသက်??